XOG:Axmed daaci oo xil muhiim loo magacaabayo#aqriso warbixin faafaahsan | Xaqiiqonews
XOG:Axmed daaci oo xil muhiim loo magacaabayo#aqriso warbixin faafaahsan
Guddoomiyihii hore Ee Degmada Wadajir Axmed Xasan Cadoow “Axmed Daaci” ayaa markan u soo istaagay in uu xil muhiim ah ka qabto dowlada uu Madaxweynaha ka yahay Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Axmed Daaci oo horey u soo noqday Guddoomiyihi Degmada Wadajir xiligii Guddoomiyaha Gobolka uu ahaa Maxamuud Axmed Nuur Tasrsan ayaa u hanqal taagaya hadda in loo magacaabo Taliyaha Nabadsugidda Gobolka Banaadir.
Arrinta ayuu kala kaashanayaa Odayaal iyo Xildhibaano ay isku heeb yihiin oo ku dhow ama saaxiib dhow la’ah Ra’isul wasaare Xasan Cali kheyre waxaana warar sheegayaan inXildhibaanada iyo Odayaasha ay balanqaad ka heystaan R/wasaaraha.
Waxaa sidoo kale Xogta ku helnay in Ra’isul wasaare Xasan Cali kheyre uu Xildhibaanada ku heebta ah Axmed Daaci uu ku war geliyay in balantaas uu u oofin doono balse ay kawar sugaan inta Xukuumada Cusub laga ansixinayo oo ay ka saldhiganayaan Golaha Wasiirada.
Axmed Daaci ayaa la xasuustaa intii uu guddoomiyaha ka ahaa Degmada Wadajir qarax miino oo lala eegtay gaarigiisa uu ka soo gaaray dhaawac culus qaraxaasi oo sababay in mid ka mid ah lugihiisa uu waaayo.
Lamana oga in balan qaadka Ra’isul wsaare Xasan cali kheyre uu siiyay Odayaasha iyo Xildhibaanada xilka u raadinaya Axmed Daaci uu u fulin doono iyo in kale wallo warar hoose ay sheegayaan in R/wasaare ay u badan tahay in uu balantaas ka dhabeeyo.